Isizathu sokuba Sivukele | Ukutshabalala Kwemvukelo
Siphakathi kwimozulu kunye nokuwohloka kwendalo. Sijongene nekamva elingaqinisekanga- ilizwe lethu lisengxakini kwaye ubomi uqobo busemngciphekweni. Ngoku ayiloxesha lokungayihoyi le micimbi; ngoku lixesha lokwenza ngokungathi inyani iyinyani. Inzululwazi icacile. Siphakathi kokuphela kwezinto esizenzayo kwaye oorhulumente bethu abenzi ngokwaneleyo ukukhusela abemi babo, oovimba bethu, ukwahlukahlukana kwendalo yethu, iplanethi yethu kunye nekamva lethu.
Le ngxaki ayazi mida, ubuhlanga, kwaye ngelixa ubutyebi bunokubonelela ngokhuseleko oluthile, konke kokwethutyana. Iwotshi ingxamile, kwaye ukuba asiphumeleli ekumanyeni ukukhusela iplanethi yethu, wonke umntu uyakuchaphazeleka- wena, usapho lwakho, wonke umntu nayo yonke into oyithandayo …
… kwaye yonke intlekele iqulethe ukubakho kotshintsho.
ukulungele ukuzidibanisa ne-XR?
Sonke siyivile ngaphambili - Umhlaba uya usiba shushu, amanqanaba e-CO2 ayenyuka, kwaye siphakathi kwe-Sixth Mass Extinction (iAnthropocene Extinction). Sijongene nemicimbi emibini ebaluleke ngokulinganayo- ilahleko yendalo kunye notshintsho lwemozulu. Zombini zineziphumo ebezingalindelekanga ezimbi kungaphelelanga kuthi njengabantu, kodwa kwinto yonke ephilayo nakwinkqubo yezendalo. Kungaphandle kwamathandabuzo ukuba yimisebenzi yabantu ebangela olu tshintsho.
Ukuphulukana neZinto eziphilayo kunye nokuTshabalala kwento yonke
Sijongene nelahleko ye over 1 million species, ngokuthe ngqo ngenxa yendlela yabantu yokuphila, uqoqosho olukhutshiweyo, kunye namanqanaba okusetyenziswa. ‘Utata wendalo ephilayo’ uE. UWilson uqikelela ukuba siphulukana ne-27,000 yeentlobo ngonyaka, okanye enye kwimizuzu eli-19-yona uqobo luqikelelo kunye nebhunga leZizwe eziManyeneyo kwi-biodiversity ebeka kwi-150 yonke imihla. Iinkqubo zethu zeplanethi zisebenza kunye njengenxalenye yento yonke - xa elinye icandelo lichaphazelekile, linokuba nefuthe lolawulo, lube nefuthe elinamandla kuwo onke amalungu ewonke. Ukutshatyalaliswa kwamahlathi kunciphisa amandla omhlaba okugcina i-carbon ngokwemvelo; ukukhutshwa kwezinto ezingafunekiyo kunye nezolimo kutshabalalisa iindawo zendalo; izifo kunye neentlobo ezingenayo zisasazeka ngeendlela zorhwebo; Ukusetyenziswa ngokugqithisileyo kukhokelela ekubeni iintlobo ezininzi zezilwanyana ziphele.
Njengoko siqhubeka nokutshabalalisa umhlaba wendalo - iinkqubo zenkxaso yobomi boMhlaba - sizibeka emngciphekweni wezifo kwiintlobo zasendle, zikhokelela ekuqhubekeni kunokwenzeka kwezifo ezongezelelekileyo ezifana neCovid-19.
Le misebenzi ibangela ubhubhane ngokuzisa abantu abaninzi kunxibelelwano kunye nokungqubana nezilwanyana, apho iipesenti ezingama-70 zezifo zabantu ezivelayo zivela khona ... ukubandezeleka okungathethekiyo kwabantu kunye nokumisa uqoqosho kunye noluntu kwihlabathi liphela. Esi sisandla somntu ekuveleni kobhubhane. Nangona kunjalo [uCovid-19] inokuba sisiqalo nje.
Ukulahleka kwezinto eziphilayo ezahlukeneyo kuchaphazela kakhulu ngakumbi - iinkqubo zethu zokutya, iinkqubo zoqoqosho, ukomelela ebusweni bemozulu embi. Ukusuka kwi-Aspirin ukuya kunyango oluninzi lomhlaza, ngaphezulu kwama-50% awo onke amayeza ekusebenziseni okusebenzayo kweeklinikhi come from irreplaceable natural sources, nezazinzulu zikholelwa ekubeni amayeza amaninzi angafunyanwanga asilindele kwiindawo ezityebileyo eziphilayo ezinjengeAmazon namahlathi aseMpuma Asia. Ngokutshabalalisa iindawo zokuhlala, sitshabalalisa ikamva lethu.
Utshintsho lwemozulu kunye namanqanaba e-CO2
Ishumi ngalinye lamashumi amane edlulileyo belishushu kunelo lokugqibela, ngelixa iminyaka emi-5 edlulileyo iyeyona ishushu kwezakha zarekhodwa. Utshintsho lwemozulu sesinye sezona ziphumo zonakalisayo kuluntu lwethu olunamashishini. Kwi-2018, iingcali eziphezulu kumacandelo abo, i-UN International Panel on Climate Change (IPCC) ikhuphe special report kwiziphumo zenkqubo ye-1.5 ° C emhlabeni.
1.5 isidanga asivakali ngathi asiyonto ingako, akunjalo? Xa sithetha ngokugqibeleleyo kweplanethi, kuninzi kakhulu. Iziphumo zokusivumela ukuba sidlule kwi-1.5 ° C ziyakuba yintlekele kuwo onke amanqanaba: iziqithi kunye needolophu eziselunxwemeni ziyanyamalala ngenxa yokunyuka kwamanqanaba olwandle, ubushushu obugqithisileyo obubulalayo, imbalela kunye nokunqongophala kokutya namanzi, kunyanzela bonke abantu ukuba babaleke amakhaya abo. Akunzimanga ukubona ukuba sinengxaki enkulu ezandleni zethu. I-1.5 ° C inokuba yintlekele- kwimpilo yethu, kwindalo, kuqoqosho lwehlabathi, nakwindlela yethu yokuphila.
Siyazi ukuba uxinizelelo lokufudumeza igesi engcolisa umoya i-CO2 kumoya wethu inyuke ngemozulu engama-45% ukusukela ngoHlaziyo lwezoShishino, ubukhulu becala njengesiphumo semisebenzi yabantu - ukutshisa izinto zokubasa ezenziwe ngabantu ukwenza umbane, ukuthintela umhlaba "icarbon sink" ebaluleke kakhulu ngokususa amahlathi emfuyo nemveliso yokutya, iinkqubo zothutho, kunye nemveliso yoshishino.
Kufuneka sijongane notshintsho lwemozulu kunye nezityalo nezilwanyana ngaxeshanye ukuba sinethuba lokuphepha intlekele.
Simi emaweni. Singayamkela inyani yento esijongane nayo, okanye sinokuqhubeka nokukhaba inkonxa ezantsi kwendlela kwaye sivumele iziphumo zeplanethi yokufudumeza ukuba neziphumo ezibi nangakumbi kubo bonke abantu abaphilayo. Sele sivalelwe kwinani elithile lokufudumala kunye nelahleko yendalo, kodwa lisekho ixesha lokutshintsha eli bali.
Ingxelo ye-IPCC ithi kufuneka sifikelele kwi-zero emissions ngo-2030 ukunqanda ukunyuka okungaphezulu kwe-1.5C wezidanga, ezinokuthi zithathe ukwehla okukhulu kokukhutshwa kwekhabhoni, kunye notshintsho olukhulu kwindlela esiphila ngayo kwaye sinxibelelana noMhlaba.
Qikelela ukuba? Ukudityaniswa ngokukhawuleza kwabantu abaninzi kunye noorhulumente kwiCovid 19 kusibonisa ukuba singaziguqula njani ngokukhawuleza izinto xa kufuneka njalo. Ubhubhane usibonisile ukuba impendulo ngokulingana nengxaki, inokwenzeka kwaye iyimfuneko. Sinomzekelo; sibonile ukuba singatshintsha kakhulu indlela esiziphethe ngayo kunye neenkqubo zoqoqosho xa kufuneka njalo. Eli lixesha lokuba samkele iinyani zeMozulu kunye nezoNgxamiseko zeNdalo, kwaye sisebenzise indlela efanayo yokucinga - ukunciphisa kunye nokuziqhelanisa nekamva elihamba ngokukhawuleza kuthi. Yakha iinkqubo ezomeleleyo, ukuxhasa abona basesichengeni, ukutshintshela kuqoqosho oluhlaziyayo kunye nolwabiwo, kwaye uhlale ngaphakathi kwemida yethu yendalo. Singazitshintsha iinkqubo ezisizise kweli nqanaba, kuba akukho ndlela yimbi sinokukhetha ngayo. Kufuneka sihlaziye ubudlelwane bethu noMhlaba.
Yintoni eyenza iXR yahluke?
Silungisa indlela eyahlukileyo. Umhlaba esifuna ukuhlala kuwo ufuna inkcubeko esempilweni, enobuchule bokuyila, yomelele kwaye ikwazi ukuziqhelanisa. Sijongene nokukhetha okunzima kwaye ukuza kuthi ga ngoku, ezi ntlekele ziye zadibana nomzamo omncinci koorhulumente kunye namaziko ukutshintsha indlela esikuyo.
Ngawaphi amanyathelo athathwe ngoorhulumente ngokucacileyo awanelanga xa ubuqonda ngokwenyani ubukhulu bento esijongene nayo. Isivumelwano semozulu saseParis bekufanele ukuba sikhuthaze oorhulumente ukuba bathathe amanyathelo ngokudibeneyo. Akukhange kwenzeke. Siyaqonda ukuba amaziko ethu akayithathi nzulu le ngxaki, kwaye ke ngoko kufuneka sibuyisele amandla ebantwini ukwenza izigqibo ezinesibindi ezifunekayo ngokuthatha inxaxheba kulawulo lwentando yesininzi kunye nakwiindibano zabemi.
I-XR ingaphaya kwezePolitiko- asibophelelwanga yimigca yezopolitiko okanye imigca yenkcubeko, njengoko imeko yemozulu kunye neEcological engxamisekileyo iwela loo migca. Asixhasi oorhulumente abathile okanye amaqela ezopolitiko.
Ibango lesithathu leXR yinxalenye yento esenza sahluke- "Urhulumente kufuneka enze kwaye akhokelwe zizigqibo zeNdibano yaBemi malunga nemozulu kunye nobulungisa bendalo." Iindibano zabemi kwihlabathi liphela zijongana nemicimbi yezopolitiko engathandi okanye yoyika ukuyichukumisa. Zakhelwe ukunceda ekuthatheni isigqibo ngezisombululo, nendlela esiya kuthi ngayo xa sisonke sifezekise iinkqubo zokuziqhelanisa ezifunekayo ukumelana nengxaki, kumda wexesha inzululwazi esixelela ukuba iyafuneka.
Indibano yabemi idibanisa abantu bemihla ngemihla abavela kuzo zonke iinkalo zobomi ukuphanda, ukuxoxa nokwenza izindululo malunga nomba othile. Amalungu eNdlu akhethwe kwinkqubo ye-lottery ukuqinisekisa ukuba ababonwa nakweliphi na iqela lezopolitiko okanye umdla okhethekileyo, kunye nokuqinisekisa ukuba babonakalisa ilizwe liphela. Oku kuthetha ukuba nabani na unokujonga kwiNdibano yaBemi kwaye abone abantu abafana nabo, baphila njengabo, kwaye babelane ngezinto ezibaxhalabisayo. Ngoncedo lwabaququzeleli abanezakhono, eli qela labameli labantu lemihla ngemihla lisebenza ngolwazi oluvela kuluhlu olubanzi lweengcali kunye nabachaphazelekayo. Bathetha ngezimvo nezimvo zabo ezahlukeneyo baze bafumane into abavumelana ngayo.
Iindibano zabahlali zisetyenziswa kwihlabathi liphela ukujongana nemiba ebalulekileyo abezopolitiko abangathandiyo, okanye boyike nje ukuyichukumisa. Okwangoku kukho iiNdibano zaBemi beMozulu kunye nezoLimo eziNgxamisekileyo ezenzeka eFrance, eUK nase Canada.
Ukupheliswa kwemvukelo kwenziwa ngabantu abavela kuzo zonke iindlela zobomi, imvelaphi eyahlukeneyo, iinkcubeko, kunye nokudibana kwezopolitiko-abantu abanjengawe, beza kunye ukudala ibali elahlukileyo. Siyayazi le ngxaki sijongene nayo, kwaye sifuna ukutshintsha ikamva. Lo mlo ngowethu, kwaye sonke kufuneka sikulungele ukuyimela inyaniso kwaye sijamelane nayo.
Ukusombulula imeko yemozulu kunye nengxaki yendalo ayisiyondlela ilula, kwaye abantu baguqukile ukuze babeke phambili izibonelelo ezikufuphi kwiziphumo zexesha elide. Imeko yezulu kunye nengxaki yezendalo lolona vavanyo lokugqibela kwezi mfuno zichaseneyo. Nguloliwe ohamba kancinci ohamba ngenqwelomoya, ochaphazela abanye ngelixa abanye bengekho, kodwa ekugqibeleni, le ngxaki izakuwisa uqoqosho lwethu olungenamandla kunye neenkqubo zonxibelelwano.
Yiyo loo nto thina, njengabavukeli, sihlanganisene ukuze sithathe inyathelo. Siyayiqonda intswela-bulungisa - hayi kumahlwempu ehlabathi kuphela, kodwa nakwilo lingekazalwa - ukuba phantse isiqingatha sezinto ezikhutshwayo ziveliswa ngabantu abangaphantsi kwe 20% yabemi bayo.
Kude kakhulu, sibeke phambili inzuzo ngaphezu kwendalo, ukukhula koqoqosho kunabantu. Lixesha lokuba siphinde sicingisise ngeenkqubo zethu, sitshintshe injongo, kwaye sitshintshele kwinkcubeko yokuvuselela. Elinye ilizwe linokwenzeka. Okwangoku sibona i economies overhauled epheleleyo kunye neenkqubo ezakhiwa kwakhona phambi kwamehlo ethu. Iindlela zakudala zokuthembela kuphela kuhlumo lwezoqoqosho njengesalathiso sempilo yoluntu akusekho kukhetho. Ngoku lixesha lokuba sifake iposti yethu yokwakha ngokutsha i-Covid kunye neenkqubo ezintsha. Iinkqubo ezisekwe kukulingana, zixhasa isiseko sethu sentlalo, ngaphakathi kwemida yeplanethi kunye nophahla lwendalo, kwaye zakhiwe ukuze zikwazi ukumelana nokomelela okufunekayo ukujongana neempawu zeMozulu kunye neNgxakeko yeNdalo.
Ngamaqela angaphezu kwamaqela e- 1191 kumazwe e- 84, sele sisenza umohluko. I-XR inikwe iwonga ngokunyanzela umthetho, ukutyhala oorhulumente ukuba bathathe inyathelo, kunye nokususa intetho yoluntu malunga nemozulu kunye nengxaki yendalo ngokusebenzisa uqhanqalazo lwethu lokuyila, lokuzoba, oluzinzileyo nolungenabundlobongela kwihlabathi liphela. Siyalandela ezinyathelweni zabaninzi abeza phambi kwethu. Ukusuka kwi-India ye-Independence Movement ukuya kwi-Women's Suffrage, i-Civil Rights Movement ukuya kwi-Arab Spring, imbali isibonisile amaxesha ngamaxesha ukuba uqhankqalazo olungenabundlobongela lusebenza njengesixhobo esinamandla sokuzisa utshintsho. Ukanti, zikhona akukho ziqinisekiso. Njengabavukeli, siyazi ukuba inyani yangomso yinkxalabo yanamhlanje. Ilizwe elonakaliswe lutshintsho lwemozulu kunye nelahleko yezinto eziphilayo zizinto ezinokuthi zisichaphazele kakubi sonke.
Akukho enye indlela esinokukhetha ngayo. Sivukela iinkqubo ezisifikise apha. Siyavukela kwikamva esilifunayo. Siyavukela kuba luxanduva lwethu ukwenza. Asisenalo ixesha lokuchitha. Akukho nto ingenakwenzeka-sisengabhala ibali esilifunayo kwaye siza kuthi Njengabantu ngabanye singenza umohluko, ngokudibeneyo. Siza kuyenza kunye le nto - siguqule umhlaba, senze utshintsho oluhlala luhleli kwaye sakhe ikamva elingcono lomntu wonke.
Ihlala ibonakala ingenakwenzeka ide yenziwe
Yiba yinxalenye ...or take a deeper dive into the science.